Sanduk Phuket: UK na-eduga na nlọghachi nke ndị njem nleta na Europe na Thailand
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Sanduk Phuket: UK na-eduga na nlọghachi nke ndị njem nleta na Europe na Thailand
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Gọọmentị UK mere mkpebi ka ha ghara ịmanye ndị mgbochi iche na ndị njem na-alọghachite site na mba a na-akpọ "Amber List", nke gụnyere Thailand.
A na-enyocha atụmatụ Phuket Sandbox iji tụlee ma nyochaa ya site na ụfọdụ ndị isi ya na ndị nketa ya.
Ulo ahia UK na - eduga nloghachi nke ndị njem Europe na 12% nke ndị njem 4,568 mba ụwa ruo ugbu a.
Enweela akwụkwọ abalị 168,862 n'ofe ụlọ nkwari akụ 305 maka ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa 14,844, dị ka data ndị njem nlegharị anya nke Thailand.
Dịka akara akara izu abụọ na-abịa kemgbe mmalite nke otu n'ime njem njem ụwa kachasị achọ, ndị obi ike Phuket Atụmatụ ụfọdụ nke ụlọ ọrụ Sandbox na-enyocha ma na-enyocha ya site na ụfọdụ ndị isi ya na ndị nketa ya.
Ihe nchoputa di ugbu a bu na ahia UK na - eduga nloghachi nke ndi njem Europe na 12% nke ndi 4,568 biara na mba rue July (July 11) na - abia site na UK. UK na Phuket, ụzọ nnweta-ụzọ site na London Heathrow gaa Phuket International wee gboo mkpa.
Ọnụọgụgụ gọọmentị UK emebeghị ka ọnụ ọgụgụ a bukwuo ibu na-akwadoghị mmachi mgbochi ndị njem na-alọghachite site na mba a na-akpọ "Amber List", nke gụnyere Thailand. Iwu a ka akọpụtara na ọ ga - eduga na ịrị elu 23% na ndenye akwụkwọ ezumike mba ofesi site n'aka ndị Britain.
Onu ogugu ulo 168,862 abiala ebe edere na họtelu 305 maka onu ogugu ndi mmadu 14,844 na onu ogugu nke abali iri na abuo Ikike nlegharị anya nke Thailand data na July 11.
Ihe okike na mmejuputa iwu nke Phuket Sandbox bụ mgbalị na-arụkọ ọrụ n'etiti ndị ọrụ ọha na eze, yana ndị nnọchi anya ndị njem, ndị ọbịa na ndị ọrụ ụgbọelu ga-eduzi ọrụ a na-aga n'ihu, yana ndị na-enyocha ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara n'ahịa.
“Ọ bụ usoro nwa, mana ihe ịrịba ama na-agba anyị ume ugbu a,” ka Ravi Chandran, Onye Isi Nchịkwa nke Laguna Phuket kwuru. “Ahịa UK anabatala ọsọ ọsọ n’agbanyeghi na ọ bụ ọnwa ọkọchị UK ma obi dị anyị ụtọ ịnabataghachi ndị Briten bụ ndị anyị na-elekọta ụlọ oriri na nkwari anyị asaa mejupụtara 20% nke ndị mbata anyị ruo ugbu a. Ndị ọzọ ahịa bụ Thailand, US, UAE na Israel. ”
Ndị njem nlegharị anya mba niile na Phuket kwesịrị ịnwale ule PCR oge niile. Iji mee nke a, Laguna Phuket rụkọrọ ọrụ na Bangkok Hospital Phuket n'oge na-adịbeghị anya iji guzobe ụlọ ọrụ nnabata mba ụwa nabatara na mpaghara ya, nke bụ ụlọ ụlọ oriri asaa.